Niteraka hatezerana ho an’ny vahoaka ny filazan’ny filohan’i Angola tao anatin’ny antsafa fa tsy misy mosary ao amin’ny firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Avrily 2019 5:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Italiano, Swahili, Français, Português
João Lourenço, Filohan'i Angola. Sary: Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0
Niteraka fahatezerana teo amin'ny olom-pirenena ny antsafa nataon'ny Filohan'i Angola João Lourenço tao amin'ny RTP, fahitalavi-panjakana ao Portiogaly, izay nanambaràny fa tsy misy hanoanana ao amin'ny fireneny .
Nandritra ny antsafa nifanaovana naharitra 30 minitra tamin'ny 4 Martsa,nanondro ny tatitra ofisialin'ny UNICEF ilay mpanao gazety Portiogey ao amin'ny RTP África izay nilaza fa matin'ny hanoanana ny vahoaka any Angola. Nandà ny fisian'ny mosary ao amin'ny firenena i Lourenço , ary niaiky fa nisy ny tsy fahampian-tsakafo . Hoy izy:
Ny hampihenana ny tahan'ny fahantrana, noho ny taona maro nifandonana tamin'ny ady mitam-piadiana no tolona ataonay. Misy fanampiana ara-tsakafo any Angola ankehitriny, ary tsy misy afaka milaza fa misy hanoanana [goavana] any Angola fa resaka tsy fahampian-tsakafo no misy.
Nilaza izany ny filoha João Lourenço talohan'ilay fitsidihan'ny filoha Portiogey Marcelo Rebelo de Sousa tany Angola ary andro vitsy talohan'ny nanakianan'ny pretra Katolika sy ny mpikatroka mpiaro zon'olombelona ny fahafatesan'ireo Angoley tamin'ny hanoanana tany amin'ny faritra iray mijaly noho ny hain-tany.
Nametra-panontaniana momba ny fanehoan-kevitry ny filoha ilay mpikatroka Manuel Mapanda, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Dago Nível:
Ahoana no hilazan'ilay rangahy fa tsy misy ny hanoanana any Angola? Tsy namaky ny tsikera nataon'ny mopera Jacinto Wacussanga momba ny fahafatesan'ny Angoley iray tamin'ny hanoanana ve izy? Midika ve izany fa tsy misy hanoanana ankehitriny ao Gambos sy Curoca? Raha vantany vao nandray ny fahefan'ny filoham-pirenena i Jlo [João Lourenço] dia nahazo ny fitaovana fototra tena ilaina ny ankamaroan'ireo Angoley, ary foana ny hanoanana?
Nanambara mazava ny fikasany hiady amin'ny kolikoly ihany koa ny filoham-pirenena Angoley, izay ao anatin'ny fandaharan'asan'ny antoko nandritra ilay antsafa nahitana ity resaka ity:
Tsy misy olona afaka manome antoka fa tsy hisy kolikoly manomboka eto na hoe tsy hisy ny olona mpanao kolikoly, fa saingy tsy hijanona ho tsimatimanota izy ireo. Tsy hisy intsony ny tsy azo kitihina, araka ny filazan'i João Lourenço. Efa lasa izany fotoana izany.
Tamin'ny taona 2018, namokatra fanadihadiana (tsy misy amin'ny aterineto) mitondra ny lohateny hoe “Angola, firenena tandindonin-doza” ny Zaikaben'ny Faritra ho an'ny Fampandrosoana ny Anjerimanontolo (FORDU), fikambanana sivily eo amin'ny sehatry ny fanabeazana izay manana ny foibeny any atsimon'i Angola. Manasongadina ny habetsahan'ny vahoaka mitady sakafo ao anaty fako, na io ao afovoan'ny renivohitry ny faritany ao Huambo, izay lohahevitry ny fanadihadiana, na ao amin'ny renivohitry ny firenena ao Luanda .
Pikantsary avy amin'ny fanadihadiana, azo jerena amin'ny DVD fotsiny ihany | Sarin'ny mpanoratra, Simão Hossi — nahazoana alalana
Nisy fanakianana mazava momba ny fanamarihan'ny filoha tao amin'ny JM. Notícias , pejy Facebook natokana hizarana vaovao:
Mila manaiky isika fa mbola maro ireo olona any Angola no miaina any ivelan'ny fiarahamonina, olana izay sarotra vahàna raha tsy misy ny fampiroboroboana ny fandaharan'asa azo itokisana amin'ny fampiatiana ara-tsosialy, izay itazonana azy ho tompon'andraikitra. Fa tsy amin'ny fisandratan'ny sangany vaovao amin'ny mpisoloky vaovao izay tsy tafala tamin'ity teo aloha, izay nahazo tombony amin'ny fisokafana ankehitriny izay i J.Lourenço no mpandray anjara fototra sady mpitambolan'ny firenena.
Jereo izay tena fanamby lehibe eo anoloan'ny masonao, mba handresena ireo olana eo amin’ ny sehatry ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fonenana, sns., izay tokony farafaharatsiny mba efa nahitana marika na dia kely aza, saingy tsy nisy izany.